घरमा माउसुली देख्नुभयो ? यस्तो हुनसक्छ संकेत.. – Suchana Hub
घरमा माउसुली देख्नुभयो ? यस्तो हुनसक्छ संकेत..
काठमाण्डौ । प्रचलित शकुन शास्त्रमा उल्लेख गरिए अनुसार माउसुलीलाई कुनै विशेष समयमा देख्नु, जमीनमा या शरीरमा खस्नु भविष्यका लागि शुभ–अशुभ घटनाको संकेतसँग जोडिएका हुन्छन् । तिहारको समयमा माउसुली देखिनुलाई लक्ष्मीको प्रतिक मानिन्छ भने यसले आगामी वर्षमा घरमा धनसम्पत्तिमा बृद्धि हुने संकेत दिन्छ। भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
यदी घरको भित्तामा माउसुली देख्नु भयो भने तत्काल मन्दिर अथवा भगवानको मूर्ति नजिकै राखिएको अक्षता लिएर माउसुलीलाई छर्कदै आफ्नो मनोकामना भनेमा मनोकामना पुरा हुने मान्यता रहेको छ । साथै माउसुलीको पूजा अर्चना गर्नाले धन समबन्धी समस्याको हल हुने धार्मिक मान्यता रहेको छ।
Previous कस्तो प्रवितीका हुन्छन् मेष राशिका मानिसहरु ?
Next मेकअप लगाएरै सुत्ने बानी छ ? यो पढ्नुहोस्..